Ikhaya Iibhulogi zeendaba Iingxelo ezintsha zikaRhulumente wase-UK malunga neZonografi kunye nokuziphatha okubi ngokwesondo
Umba wobundlobongela obenziwa kwabasetyhini namantombazana kuluntu lwanamhlanje unzima kakhulu. Amanani obundlobongela basekhaya, ukungabulali kunye nokufa kwabantu ngokwesondo kunye nokuhlukunyezwa ngokwesini ngokubanzi kuyaqhubeka ukunyuka ngezinga elothusayo, ngakumbi ekutshixweni. Uphononongo loncwadi olusandula ukupapashwa kunxibelelwano phakathi kokusebenzisa iphonografi kunye nokuziphatha okubi ngokwesini kunye nokuziphatha okwesihlandlo sokuqala bafuna izimvo zabasebenzi abaphambili abajongana nabo baphethwe gadalala kunye nabaphatha gadalala. Olu hlalutyo lufumene oku kulandelayo: uninzi lwabasebenzi abaphambili abasebenza kwabo baphathwa gadalala bachaza iphonografi njengeyona nto inefuthe ekuziphatheni okubi ngokwesini kunye nokuziphatha kwabasetyhini namantombazana. Udliwanondlebe lwenziwa nabasebenzi abaphambili kumacandelo ezentlalo, ezobulungisa kunye nakwezonyango.
Nangona kunjalo kufuneka sibuze umbuzo, kutheni kuthathe urhulumente wase-UK unyaka ukugqitywa kwezi ngxelo ngoFebruwari 2020 ukupapashwa kwazo ngo-2021? Ngokuqinisekileyo asinakugxeka uCovid-19 kunye noBrexit ngayo yonke into. Ngaba oku kugcinwa kweshelfu yengxaki ye-porn ngoorhulumente base-UK abalandelelanayo sisalathiso sendlela abasetyhini nabantwana abancinci abathetha ngayo kubo? Okokuqala ubungqina beminyaka yobudala bomthetho we-porn bakhatywa kwingca ende, ngoku oku kulibaziseka ekupapashweni kweengxelo ezimbini ezibalulekileyo.
Ngelixa ezi ngxelo ziluncedo ekuboniseni iphonografi njengeyona nto, zimele ithuba elilahlekileyo kurhulumente wase-UK lokuba aqonde ukuba kutheni iphonografi ingoyena mqhubi uphambili kwezi ndlela zokuziphatha kunye nokuziphatha okuyingozi. Kungenxa yokuba uphononongo loncwadi oluyalelweyo lwalusekwe kuphando lwesayensi yezentlalo kuphela. Olona phando lubalulekileyo kwimpembelelo yephonografi iyafumaneka kuncwadi lokuziphatha gwenxa apho unxibelelwano phakathi kokuncipha kokusebenza kwengqondo (okubandakanya ukukwazi ukuba novelwano kwabanye) kunye nokuziphatha okungxamisekileyo kuyafumaneka.
Ingxelo yokuqala, elungiselelwe iOfisi yokuLingana kukaRhulumente, ivuliwe Ubudlelwane phakathi kokusebenzisa iphonografi kunye nokuziphatha okubi ngokwesini kunye nokuziphatha. Sisishwankathelo esiluncedo sophando oluthile kwicandelo.
"Injongo yale ngxelo kukubonelela ngobungqina obusisiseko kwi-Ofisi yezoLingano kaRhulumente (i-GEO) kubudlelwane phakathi kokusebenzisa iphonografi kunye nokuziphatha okuyingozi kwabasetyhini, ngokwembono yabo basebenza nabantu ababonakalisile, okanye abasemngciphekweni ibonisa, le ndlela yokuziphatha. Njengobuntununtunu besihloko obukwenza kube nzima ukufundisisa ngokuzama, le ngxelo igxile kumazwi abo basebenza ebaleni ukuze uwuqonde ngokupheleleyo umba. Ukuza kuthi ga ngoku, kwenziwa udliwanondlebe nabasebenzi abaphambili kumacandelo ezentlalo, ezobulungisa, nakwezonyango.
Isishwankathelo seziphumo eziphambili:
Uninzi lwabasebenzi abaphambili ngaphambili lukhankanye iphonografi njengeyona nto iphambili ekuziphatheni okubi ngokwesini kwabasetyhini nakumantombazana. Bonke bayivuma njengeyona nto xa kamva yaziswa kwingxoxo.
Abasebenza ngaphambili baphakamise uluhlu lwezinto ezidlala indima ekuziphatheni okubi ngokwesini kwabasetyhini nakumantombazana. Unxibelelwano lwezi zinto, kubandakanya iphonografi, inegalelo kwimeko efanelekileyo yokuququzelela ezi ndlela zokuziphatha.
Ujoliso lwengxelo lujolise kumava nakwizimvo zabasebenzi abaphambili, bahlala bebonisa iminyaka emininzi emsebenzini wabo wangoku kunye / okanye kwiindima ezahlukeneyo ebaleni. Ayibonisi imbono yesandla sokuqala okanye umbono wabantu abasemngciphekweni omkhulu, okanye abo bafazi benziwe ngokuchaseneyo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba, ngenxa yokuba abathengi abasebenza nabo bangaphambili babonakalisile isimilo esiyingozi kwabasetyhini nakumantombazana, abaxumi abaxoxwayo abaqhelekanga kuluntu ngokubanzi.
Inani labasebenzi abaphambili baphinde bachaza indlela abaxumi babo abaye bangakhathalelwa ngayo kwimixholo yesondo abayityileyo kwi-Intanethi ekhokelele ekunyukeni kohlobo lomxholo owafunwayo-kwiividiyo ezibonisa ukuthotywa okugqithisileyo kwabafazi.
Izinto ezichaphazela isimo sengqondo esibi sesini
Ezinye izinto ezinempembelelo eziqaqanjiswe ngabasebenzi abaphambili njengegalelo kwisimo sengqondo esibi kunye nokuziphatha kwabo basetyhini kunye namantombazana zinokuhlelwa ngokwabantu, ekuhlaleni kunye nakwinqanaba loluntu.
Ngezinto ezinegalelo kwinqanaba lomntu ngamnye (njengokuzibandakanya ngokwesondo, ukuhlala wedwa ekuhlaleni, kunye namava abuhlungu obuntwana), iphonografi inokubonelela ngeqonga lokudlala nokuzonwabisa.
Ngezinto ezinegalelo kwinqanaba loluntu (njenge-machismo kunye nemilinganiselo engqongqo yesini), iphonografi inokubangela 'igumbi lokutshixa' kunye neempawu eziphambili zempumelelo.
Kwaye ngenxa yegalelo kwinqanaba lenkcubeko (njengemithombo yeendaba ezokwabelana ngesondo kunye nokunqongophala kwemfundo / incoko kubudlelwane obuphilileyo bezesondo), iphonografi inokuqinisa kunye nokuziphatha ngokwesondo kunye nokuziphatha okukhohlakeleyo, kwaye ibonakalise kunye neengxelo ezinengxaki.
Ingxelo yesibini yile Ubudlelwane phakathi kokusebenzisa iphonografi kunye nokuziphatha okubi ngokwesondo kwaye ijongene nezimo zengqondo kunye nokuziphatha kwamadoda amadala. Oku kubonakala kuluncedo oluthe ngqo ngakumbi kuncwadi, njengoko kuncinci kupapashiwe kubudlelwane phakathi kokusebenzisa iphonografi kunye nokuziphatha okuyingozi kwezesondo kwabasetyhini, ngokwembono yabo basebenza nabantu ababonisile, okanye abasemngciphekweni wokubonisa , oku kuziphatha.
Olu hlaziyo lufumene ubungqina bokuba nolwalamano olunempembelelo phakathi kokusebenzisa iphonografi kunye nokuziphatha okubi ngokwesini kunye nokuziphatha kwabo basetyhini. Ngelixa indalo kunye namandla obudlelwane ahluka ngokufunda, ukufunyanwa kubambe ngeendlela ezininzi. Unxibelelwano oluchanekileyo lwe-causal alunakho ukusekwa phakathi kwezi zinto zimbini ziguqukayo njengoko oku kuya kufuna iimeko ezingafakwanga kunye nezingahambelaniyo (ukuboniswa ngokunyanzeliswa koononografi). Ubudlelwane bunamandla ngakumbi ekusebenziseni imifanekiso engamanyala. Iziphumo zibonisa ukuba iphonografi, kunye nezinye izinto, inegalelo kwimeko efanelekileyo yokulimala ngokwesondo kwabasetyhini.
Eyona nto kugxilwe kuyo kolu hlaziyo kukusetyenziswa kwamanyala asemthethweni kunye nokusetyenziswa komthetho, kodwa kuyingozi, izimo zengqondo kunye nokuziphatha kwabasetyhini. Ijolise kwisimo sengqondo nakwindlela yokuziphatha yamadoda amadala. Ubungqina bokuphanda ukusetyenziswa kwemifanekiso engamanyala, kubandakanya iphonografi yabantwana, ayifakwanga.
Ukusuka kuncwadi oluhlaziyiweyo, iindlela ezine eziphambili zokuziphatha kunye nokuziphatha kwavela apho kukho ubungqina bokuba nolwalamano olunempembelelo phakathi kokusebenzisa iphonografi kunye nokuziphatha okuyingozi kunye nokuziphatha kwabafazi namantombazana:
Ukujonga abantu basetyhini njengezinto zesondo
Uphengululo lufumene ubungqina bobudlelwane obubalulekileyo phakathi kokusetyenziswa kwemithombo yeendaba ejolise kwabasetyhini (ebandakanya iphonografi) kunye nokubona abantu basetyhini njengezinto zesondo. Ukubona abantu basetyhini njengezinto zokwabelana ngesondo nako kwakuhambelana nezimo zengqondo ezichasene nabasetyhini; ngokukodwa, izimo zengqondo ezixhasa ubundlobongela kwabasetyhini.
Ukubumba ulindelo lwesini sabasetyhini
Uncwadi oluhlaziyiweyo lubonise ifuthe lephonografi ekuboneleleni ngesimo sokuziphatha ngokwesondo. Oku kufanele ukuba amadoda alindele ukudlala ubundlobongela kunye / okanye ukusebenzisana okuthobekileyo okuboniswe kwimifanekiso engamanyala. Kukho ubungqina bokuba ukusetyenziswa kwamanyala amanyala kunxulunyaniswa nomnqweno omkhulu wokunqwenela okanye ukuzibandakanya kwizenzo zesondo ezingqinwe ngoononophala, kwaye amathuba okuba abakholwayo basetyhini bafuna ukuzibandakanya kwezi zenzo.
Ukwamkelwa kobundlobongela obuphathelele kwezesondo kwabasetyhini
Uphengululo lufumene ubudlelwane obubonakalayo phakathi kokusebenzisa iphonografi kunye nesimo sengqondo esixhasa ubundlobongela obujoliswe kwabasetyhini, kwaye obu budlelwane buphezulu kakhulu kwimifanekiso engamanyala.
Ukuqhubeka kobundlobongela obuphathelele kwezesondo
Uphengululo lufumene ubungqina bokudibana phakathi kwamanyala kunye nokwanda kwamathuba okwenza isenzo somlomo kunye nesenzo sobundlongondlongo, ngonxibelelwano olunamandla ngakumbi kunye nokusetyenziswa koonografi. Ukusetyenziswa koonografi obunobundlobongela kunye nokuchazwa kwangaphambili komtshato wabazali gadalala yayizezona zibini zomeleleyo zesimo sokuqala sobundlobongela obuphathelele kwezesondo. Ukusetyenziswa koononografi obunobundlobongela nokuhlambalaza kwafunyaniswa ukuba kunxulunyaniswa kakhulu nokuncipha kokuzixela ekungeneleleni kwisenzo sobundlobongela obuphathelele kwezesondo.